Amathiphu awusizo wendlela yokwenza izimbobo kwi-jeans: nikeza isithombe ukuthinta.
Indlela yokwenza izimbobo kuma jeans?
indlela yokwenza i-jeans igubha
Ngamunye wethu ekamelweni elinama-jeans amadala angasakwazi ukugqoka nsuku zonke, kodwa awufuni ukuhlukanisa namabhuluki wakho ozithandayo. Noma kunjalo, noma iyiphi i-denim ingashintshwa futhi iphefumule impilo entsha, yenza izinhlangothi ezimbalwa kuphela. Izigqoko, ama-rhinestones kanye nokubukeka okudala kuyimfashini ephakade, ama-classics wesitayela ajwayelekile. Ake sithole ukuthi singenzani izimbobo kuma jeans ukuze senze isithombe sokudlala se-fashionista yedolobha.
Ukuzibophezela kumagundane we-jeans - izici zesitayela
Imfashini yebhola elibhejiwe futhi elingenandaba, ngokuguqa ngamadolo, ngaso sonke isikhathi lishiya ngokwalo ilungelo elingenakuphikwa lokuba khona. Kodwa kungani izigidi zamantombazane zikhetha le ndlela yokugqoka? Ake sicabangele izizathu eziyinhloko zothando lendaba enjalo ye-wardrobe:
Lokhu kunikeza ubulili isikhalazo esithombeni. Kubonakala sengathi ezinqeni zonke izinto zivaliwe, kodwa izimbobo ezimbalwa kuphela ezivuthiwe endaweni engavamile zibe yinto yokukhangwa kwemibono yabesilisa.
Izambatho ezinjalo ziwusizo, ngoba kufanelekile kunoma yisiphi isikhathi. Ngaphezu kwalokho, amabhulukwe angahlanganiswa nanoma yikuphi phezulu: I-T-shirt, i-blouse, i-T-shirt, ijaji, i-sweatshirt, njll.
Kuyinto ehlelekile. I-denim evulekile ingenziwa kunoma iyiphi ibhulukwe, ngisho endala futhi igugile, kodwa izoshintsha ngokushesha ibe yinto yokugqoka ewendwangu.
Ama-fashionistas anamuhla akholelwa ngephutha ukuthi ukwenza i-jeans egaqile kulula. Nokho, eqinisweni, lokhu kuyinkimbinkimbi, okudinga ulwazi nolwazi olunembile ekusebenzeni. Ukuze wenze izimbobo zibukeke njengombono wokwakha, futhi hhayi umkhondo wokuwa e-asphalt, kubalulekile ukwenza imizamo. Khona-ke isithombe sakho semfashini ngeke siphumelele. Ngakho, cabangela ukulandelana kwezenzo:
Khetha "isisulu" esifanele sokuhlolwa. Kunconywa ukuthatha ibhulukwe eligugile, njengoba ukugqoka kwemvelo kwenza izintambo zibe lula, futhi zilulaza ngendlela efanele.
Dweba izindawo lapho ufuna ukwenza izimbobo kwi-jeans. Kungcono ukwenza lokhu ngokubeka izinyawo zakho ezinyaweni zakho. Thatha ipensela bese wenza amanothi ezindaweni ezifanele.
Thola ubuso bokusebenza - okungcono kakhulu ibhodi lamapulangwe noma ibha, engabekwa ngaphansi komlenze wesifuba. Lokhu kuzokwenza inqubo yokwakha izimbobo, futhi ingalimazi ingxenye yesibili yomlenze.
Lungiselela ithuluzi. Kungaba i-pumice, i-grater ekhishini, i-sandpaper ehlanganisiwe, izikrini, ifayela le-nail, i-razor noma ummese ngama-denticles - noma yini oyithandayo futhi elula kuwe.
Ezindaweni ezimakwe, yenza izimbobo ezidibeneyo. Emaphethelweni omgodi oholelekile aphathwa nge-sandpaper noma ibanga lokubheka, ukuze bahlaziye ngokwemvelo.
Letha ubuqotho emfanekisweni - gubungela emaphethelweni we-trousers namapokhethi. Yenza ama-rubs namadolo.
Sebenza emigqeni ehambisanayo yezinto eziphathekayo: sebenzisa i-saw ukuze ubonakale obukeka kakhulu. Okufanayo kungenziwa nge-seams.
Ukusebenzisa i-bleach, sebenzisa amanzi emigodini emigodini yokubanika ukubukeka kwasekudala. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa isiponji esivamile noma ibhulashi. Ungaphinde uthele isisombululo se-chlorine ngaphakathi kwesibhakabhaka ngaphansi kwamaconsi eso, bese ufaka amaconsi amancane kuwo wonke umlenze.
Bese ugeza ama jeans wakho ukulungisa umphumela we-bleach. Kungcono ukwenza lokhu emanzini abandayo futhi ngesivinini esiphansi se-spin.
Ekupheleni kwenkambiso, qinisa izindawo ezinamahlombe. Leliphuzu elibaluleke kakhulu elizovumela ukuthi i-jeans yakho ihlale iminyaka eminingi. Uma kungenjalo, izimbobo "zingahlakazeka" okuqhubekayo, okuzobukeka ukuthi akuyona into ehlelekile. Ukuze uqinise, kuzodingeka uthathe intambo ngenaliti futhi wenze izimbalwa ezimbalwa ezinhlangothini zomgodi.
Ijee zakho zilungele! Yiba njalo ungenakuvinjelwa futhi ube nemfashini.
Indlela yokuthunga imbobo e-jeans?
Abakwa-Air Air Purifiers
Imihlobiso yezinwele ngezandla zakho
Ikhekhe eliphakathi kwekhekhe nama-hazelnuts ne-tshokolethi
I-chicken fillet e-honey-sauce uju
"Izimbangela ezingavumelani" zokuguga kwasekuqaleni
I-pasta enenkukhu, utamatisi nesipinashi
I-Laser face polishing
Ukuqinisa impilo yezingane